Ny fitsipiky ny proteinina amin'ny ankizy ao anaty urine
Ny fandinihana ny fanasitranana amin'ny zaza amin'ny vanim-potoana rehetra dia fanadihadiana tsy dia manan-danja loatra izay ahafahan'ny ankizy voan'ny aretina isan-karazany amin'ny asa sy ny aretina hafa. Ny ray aman-dreny tanora, amin'ny ankilany, matetika dia tsy mahafantatra ny fomba handikana ny valiny marina, ka matetika izy ireo dia miteraka tebiteby sy tebiteby.
Ny iray amin'ireo indostria lehibe indrindra vokatry ny fandinihana ny fanasitranana isan'andro amin'ny zaza dia ny votoaty proteinina, ny fadin-tseranana izay afaka manondro ny fivoaran'ny aretina mampidi-doza. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiteny aminareo izahay hoe inona no tokony hifantohan'io voka-dratsin'ny zaza io, ary inona no mety hitrangan'ny fanadinana.
Inona no fitsipika azo ekena momba ny proteinina amin'ny fanasitranana zaza?
Amin'ny ankapobeny, ny fihenan'ny proteinina amin'ny fanasitranan'ny zaza amin'ny vanim-potoana rehetra dia kely. Araka ny fitsipika ankapobeny dia tsy tokony hihoatra ny 0,14 g / andro. Raha mahatratra 0,15 g ny androany, dia efa voan'ny aretina proteinuria ny zaza.
Etsy an-danin'izany, mihoatra ny haavon'ny proteinina amin'ny fadin-jaza ny zazakely iray no heverina ho vahaolana amin'ny fitsipika raha mbola tsy 2 herinandro ny zaza. Izany dia noho ny fiheveran'ny hemodynamic ny zaza vao teraka, mifandray amin'ny fitomboan'ny fahafaha-mihelina ny epithelium glomerular ary ny raboka renena.
Ankoatra izany, ny fanangonana urine ho an'ny fanadihadiana dia mitaky ny fanarahan-dalàna amin'ny fitsipika sasantsasany, hany ka ny fiviliana kely dia vokatry ny tsy fahampian'ny fahadiovana amin'ny tovovavy na ny phimose ara-pahasalamana amin'ny ankizilahy. Izany no mahatonga ny toe-javatra rehetra, rehefa mahazo ny valin'ny fandalinana miaraka amin'ny marimaritra iraisan'ny proteinina mifantoka, dia atolory ny hamerina ilay fianarana. Raha manamarina ny fanitsakitsahana ny zazakely dia tsy maintsy alefa any amin'ny fanadinana fanampiny mba hanesorana aretina lehibe.
Amin'ny ankapobeny, ny fihinan'ny proteinina amin'ny urine ao amin'ny zaza avy amin'ny fitsipika dia mifandraika amin'ny antony toy ny diabeta, adin-tsaina mavesatra sy reraka, ny tsy fahampian-drano, ny fandoroana sy ny trauma, ary koa ny aretina isan-karazany ary ny fatran'ny areti-mifindra amin'ny voa. Ny fampitomboana ny fitomboana amin'ny soatoavina ara-dalàna dia manondro hatrany ny aretina lehibe toy ny amyloidose, sy ny nephrotic syndrome amin'ny glomerulonephritis.
Ny fampahafantarana amin'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ny ambaratonga mihoatra ny fampiharana sy ny antony mety hitranga amin'ity olana ity dia omen'ny tabilao manaraka:
Manoratra ilay zaza
Mpianatra faratampony ao amin'ilay zaza
Noho ny fitondran-tena amin'ny zaza?
Influenza amin'ny ankizy
Nampitomboan'ny fosilin'ny alika ny zaza
Nahoana no tsy mivoaka ny zaza ny hafanana?
Famantarana kanseran'ny tsinay
Cesarean Emergency Cesarean
Alika mpihinana alika
Herinaratra ho an'ny fahavoazana
Inona no manonofinofy?
Ala matevina ao anaty lakandrano - ady
Romanina amin'ny tananao
Ny dioxteran'Andriamanitra: olona 6 izay tsy manangona syndrome volo
Asthma bronchial amin'ny zaza - soritr'aretina sy fitsaboana
Famaritana ny trano sy trano
Nahoana isika no manonofy momba ny toto maty?